Hadalka Ra’iisul Wasaaraha xal ma u noqonayaa walaaca doorashada ay ka muujinayaan mucaaradka? – Kalfadhi
Hadalka Ra’iisul Wasaaraha xal ma u noqonayaa walaaca doorashada ay ka muujinayaan mucaaradka?
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo guddoomiyay shirka Golaha wasiirrada ee todobadkan ayaa sheegay iney laga maarmaan tahay iney doorashada xilligeeda ku qabsoonto, sida oo kalana doorashadu ay tahay sharciyadda ay ku joogaan oo xilalkana ay ku hayaan.
Xasan Cali Kheyre ayaa ku baraarujiyay golaha wasiirada in howlaha ugu muhiin ee dowlada horyaalla ay yihiin doorashooyinka ayna ka qeyb-qaataan sidii loo qaban lahaa doorasho ku dhacdo si nabad ah.
“Afartii sano waa in mar doorasho la galo, doorasho dadka intooda badan isla oggol yihiin saamileyda-siyaasadda badankood ama kuligood qeyb ka yihiin.”ayuu yiri.
“Doorasho ayaa ka dhici jirtey dalka nooceey rabto ha ahaatee, waana tan sharciyada aan halkan ku joogno na siisay.”
“Dalka doorasho inay ka dhacdo ayaa ka muhiimsan inta kale, qof walba inuu dareemo in afartii sanno mar dalkaan doorasho ka dhacdo.”ayuu sii raaciyay Ra’iisul Wasare Kheyre.
C/raxmaan C/shakuur Warsame oo hoggaamiya xisbiga mucaaradka ee Wadajir ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo uuna boggaadinayo fahamka ku aadan in doorashada ay wax kasta ka muhiimsan tahay, ayna leedahay mudnaan, maadaama ay lafdhabar u tahay xasiloonada dalka.
“Waxaan soo dhowaynayaa hadalka Raysalwasaare Kheyre uu ku balanqaaday in la qabto doorasho xiligeeda ku dhacda, la isku raacsanyahay, xasiloon saamilayda siyaasadeedna qayb ka yihiin, si loo ilaaliyo xasiloonada dalka iyo wadajirka ummada”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur”.
Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo ka mid ah siyaasiyiinta u hanqal-taagaya doorashada 2021 ayaa soo dhoweeyay hadalka ka soo yeeray Ra’iisul Wasaare Kheyre ee ahaa in dalka uu u socdo doorasho, taasoo iftiimisay wax badan oo mugdi ku jiray.
Siyaasiyiinta mucaaradka ee dalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa walaac xoog badan ka muujiyay in doorashada aaney xiligeeda ku dhicin kaddib markii muddo bil ah dib loo dhigay xiliga ay baarlamaanka hor imaan lahaayeen Guddiga Madaxbanaan ee Doorashoyinka Qaranka si looga dhagaysto warbixino la xiriira arimha doorashooyinka Qaranka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo meesha ka saaray suurta-galnimada in la kordhin doonno muddo xi-leedka Baarlamaanka iyo madaxweynaha